Expressing Myself: Reading Culture
Here is an article published in Gorkhapatra National daily, today; issued on reading and academic culture among youths.
–CP Aryal (सिपी अर्याल)
युगले नै सजिलो पारिदिएकोले हो, आजकालका युवाहरू प्राज्ञिक काममा निकै नै उत्साहित भएर लागेका छन्। हामीबीच ग्लोबल संस्कृति छ। नोबल, बुकर वा पुलिट्जर पुरस्कार बाजि मारेको पुस्तक पढ्न एक सेकेन्ड कुर्नु नपर्ने भैसकेको छ। यो ग्लोबलाइजेसनको बतासले मानिसलाई पुस्तक पढ्ने, आर्ट बेस्ड मुभी वा डकुमेन्ट्रि हेर्ने आदि कुराहरूमा बाध्य पारेको छ। जुन आफैँमा राम्रो पक्ष हो।
सिके लालको नाटक 'सपनाको साबिती' हेर्न गुरुकुल पुगेको थिएँ। प्लस टु पुस्ताको लाग्ने एउटा युवा गुरुकुल परिसरमा देखेँ। रूपक पराजुली नामको उसँग गफिन मन लाग्यो। नाटक हेर्न उसलाई केले तान्दो रैछ त? पहिले–पहिले उसलाई जिन्दगी भन्नु मोज मस्ति हो भन्ने लाग्दो रहेछ। पछि पढन्ते साथीहरूको संगतले कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानले 'जीवन बाँच्नु हो तर उमेरले होइन' भनेजस्तै उसलाई उमेरले मात्र जिन्दगी बाँच्न मन लागेन रे! यी एकजनाले भलै नेपालका सबै प्लस टु पुस्ताका युवालाई प्रतिनिधित्व त गर्दैनन् तर आस गर्ने ठाउँ हामीसँग धेरै छ। युवाहरू निकै सचेत छन् अचल अध्ययनको मामलामा। बाहिरी आवरणमा फरक देखिने तर भित्रि आवरण भने खुबै पढन्ते खालको! पढ्न सुरु गर्दा रूपकलाई 'पागलवस्ति' उपन्यास खुबै जटिल लागेको रहेछ। उनले आफू जस्तै युवाको कथा बोक्ने फिक्सनल पुस्तकहरू पढ्न मन गर्ने रहेछन्। चेतन भगतलाई आफ्नो आदर्श लेखक मान्ने रूपकले भगतका सबै सिरिज पढि सिध्याएछन्। र अहिले 'भेरोनिका डिसाइड्स टु डाई' पढ्ने तर्खरमा रहेछन्। पढ्ने बाहेक उनलाई आर्ट बेस्ड मुभी हेर्न पनि खुबै मनपर्छ।
पुस्तक प्रकाशन गृहहरू पनि पठन संस्कृतिलाई टेवा दिन क्याटालिस्ट बनिरहेका छन्। हामीकहाँका राम्रा पब्लिसिङ हाउसहरूले पनि गुणस्तरमा ध्यान दिँदै राम्रा पुस्तक प्रकाशन गरिरहेका छन्। यस्तो पब्लिसिङ कार्यमा पनि अचल युवा जमातकै बाहुल्यता देखिन्छ। नयाँ लेखक तथा नयाँ विषयवस्तुलाई ठाउँ दिने अभिप्रायका साथ खोलिएका यस्ता प्रकाशन गृहले राम्रो काम गरिरहेका छन्।
अर्किड बुक्स चलाइरहेका महेश्वर आचार्य आफैँ पनि राम्रो उर्जा भएका युवा हुन्। उनले आफ्नो प्रकाशनगृहबाट एक असफल आख्यानको आरम्भ, पहिलो प्रेमको संस्मरण, क्यापिटल हिल, अकल्पनीय लगायतका पुस्तक प्रकाशन गरिसकेका छन् जसले राम्रो चर्चा बटुल्यो। भर्खरै पारिजातको विश्वचर्चित कृति शिरिषको फूलको अंग्रेजी अनुवाद बजारमा आएको छ, अर्किडबाट। महेश्वर भन्छन् 'शिरिषको फूल'को अंग्रेजी अनुवाद 'द ब्लू मिमोशा' प्रकाशित गर्नु अचेलका युवाको सो पुस्तक अंग्रेजीमै पढ्ने चाहनालाई पूरा गर्नु नै हो। नेपाली भन्दा अंग्रेजीमै पढ्न रुचाउनेका इच्छा पूरा गर्न यो पुस्तक पक्कै पनि सहयोगी होला।' उनकाअनुसार अचेल युवामाझ पढ्ने कल्चरको अति नै विकास भएको त होइन तर पहिला भन्दा यो स्थिति त सुधि्रएको भने हो। महेश्वर अहिले युवा लेखिका शिवानी सिंह थारुको उपन्यास काठमाडौँमा एक दिन प्रकाशन गर्ने चटारोमा छन्।
पुस्तक पढ्ने संस्कृति बढाउन मिडियाले खुबै बल पुर्‍याइरहेको छ। पुस्तकको प्रचार प्रसार अचेल होर्डिङ बोर्ड लगाएर गरिन्छ, तरकारी बजार, मासु पसल वा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पोस्टर टाँसेर गरिन्छ। जता गए पनि पुस्तककै चर्चा! पुस्तकमा अपडेट नहुनेहरू त आफ्नो ग्रुपमा घोसेमुन्टो लाएर बस्नु पर्ने हुन्छ। अनि कोही कसरी अपडेट नहोस्?
ऋचा भट्टराई अहिलेको छापामा छाइरहेकी कुशल समालोचक हुन्। उनी अंग्रेजी र नेपालीमा उत्तिकै शिल्पसाथ लेख्ने क्षमता भएकी युवा लेखिका हुन्। हामीकहाँ नाटकको क्षेत्रमा पनि युवाको राम्रो सहभागिता छ। नाट्यकर्मि सुमन रायमाझी, गोपिकेश आचार्य, खगेन्द्र लामिछाने तथा भवसागर घिमिरे नेपाली नाटकको क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका युवाहरू हुन्। अजित बराल अर्का एक सशक्त युवा लेखक तथा प्रकाशक हुन्। उनले आफ्नो प्रकाशन गृह फाइन प्रिन्टबाट गुणस्तरयुक्त पुस्तकहरू निकाल्ने गरेका छन्। फाइन प्रिन्ट अहिले युवामाझ गनिएका युवा लेखक बुद्धिसागर चपाईँको उपन्यास निकाल्ने अन्तिम सुरसारमा छ। अजितले आफू र आफ्ना केही साथीहरूले महिनाभरि पढेको पुस्तकको ज्ञान एक अर्कालाई शेयर गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिवार एउटा अनौपचारिक कार्यक्रम नै गर्ने गरेका छन्।
यसबाहेक आर्ट बेस्ड मुभी तथा डकुमेन्ट्रि फिल्मको क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका अर्का युवा बलबहादुर थापा हुन्। अनि अनुसन्धान लेखनमा मजैले जमेका युवा सफल घिमिरेको खातामा उनैले सम्पादन, अनुवाद गरेको र लेखेको गरी ८ वटा पुस्तक उनको लेखन तथा सहलेखनमा बजारमा आइसकेको छ। सफलका अनुसार अबको एकेडमिक धार युवाले नै नेतृत्व गर्नु पर्छ। कपाल फुलेका पाकाहरूलाई हाम्रै समूहले चाँडै नै विश्राम गराउने उनको कथन छ।
अहिलेको युवामा यसरी जागृत भएको उर्जा देख्दा सम्भावनाका धेरै ढोकाहरू हाम्रै लागि आफसेआफ खोलिएको देख्न सक्छौँ हामी। नेपाली साहित्य, नाटक, समालोचना तथा अनुसन्धान जस्ता प्राज्ञिक क्षेत्रमा सबल युवाहरूको पसिनाले माटो मलिलो पारिरहेको छ। त्यस माटोबाट राम्रो बाली भित्रिने कुरामा हामी केही सजिलो हुने ठाउँ तयार हुँदै गएको देखिन्छ।
अंग्रेजी साहित्यमा एमए सक्नै थालेका धिरन शर्माले विद्यार्थीकाल भरी थुप्रै पुस्तक पढे। उनलाई जस्टिन गार्डरको सोफिज् वर्ल्ड उपन्यासले जत्तिको अन्य कुनै पनि पुस्तकले प्रभाव पारेको छैन। के छ त पुस्तकमा? प्राचिन ग्रिकको बाइबल आधारित सभ्यता देखि विज्ञानको बिग ब्याङ थ्योरीसम्मको ज्ञान समावेश गरिएको यो उपन्यास पश्चिमा दर्शन तथा इतिहास ज्ञानको कोलाज हो। यसैगरी मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर सकेका पोखरेली युवा विजय पौडेलको रोजाईमा फिक्सनमा 'अलकेमिस्ट' जस्ता पुस्तक भने नन फिक्सनमा 'फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमन्ट' जस्ता पुस्तक पर्छन्। उनको जस्तै हजारौँ युवाको रोजाइको पुस्तक 'अलकेमिस्ट'को कथा निकै सामान्य छ। एउटा गरिब भेँडागोठालोको कथा बोक्ने कोहेलेको यो पुस्तक युवाको रोजाइमा पर्नुको कारण भने एउटै छ, त्यो हो यसमा भएको प्रमुख पात्र स्यान्टियागोको आशावादि आँखा, उत्साह, जोश, जाँगर र कर्मशिलता। आफ्नो इलमको कारण विजयले जर्नल लेखहरू तथा अनुसन्धान सम्बन्धित पुस्तकहरू धेरै पढ्ने गरेका छन्। एउटा आर्थिक पत्रिकामा कार्टुनिस्टको काम गर्ने एक स्वप्निल द्रस्टा युवराज भट्टराईको लागि विश्व संस्कृतिको ज्ञान भएका पुस्तक पहिलो रोजाइमा पर्छन्। युवराजलाई सबैभन्दा बढी मन पर्ने पुस्तक 'अ हिस्ट्री अफ नलेज' हो जुन उनले चार पटक पढिसिध्याए।
यसबाहेक काठमाण्डौँका प्रमुख पुस्तक प्रकाशक तथा विक्रेताहरूका अनुसार तिनको पुस्तक पसलका ग्राहक भनेका विशेष गरी युवाहरू नै हुन्। गैर नेपाली लेखकले लेखेका अंग्रेजी पुस्तकहरू ती युवाहरूको पहिलो रोजाइमा पर्छन् रे। अंग्रेजीमा लेख्ने सम्राट उपाध्याय र मन्जुश्री थापाका पुस्तक किन्न आउने पनि थुप्रै छन्। अझ विश्वका प्रतिष्ठित पत्रिकाले निकाल्ने बेस्टसेलर लिस्टमा परेका पुस्तक खोज्न आउने पनि थुप्रै हुन्छन्। यी विक्रेताहरूका अनुसार नेपालमा पुस्तक पढ्ने संस्कृति बढाउन नियमीत रूपमा पुस्तक प्रदर्शनी गर्नु पर्छ।
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 9:10 AM